प्रचण्डले छोरीका लागि बनाए ५२ कराडौँको महल ? समाचार
वि.सं. २०७३ सालमा प्रधानमन्त्री भएपछि सर्वहाराको राजनीतिक सिद्धान्त बोकेर हिडेका प्रचण्डको सम्पति एक कट्ठा जमिन र तीन तोला सुनमात्र थियो । सुरुदेखि नै माओवादी पार्टीलाई सर्वहाराको आवाज भन्ने ।
गरिएको छ ।त्यसै पार्टीको प्रमुख भएपनि राजर्शी जीवन शैलीमा देखिने पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सम्पति विवरण भने सर्वहाराकै जस्तो देखिएपछि सम्पत्ति विवरणमाथि धेरैले आशंका व्यक्त नगरेका होईनन् ।
प्रचण्डले त्यो बेला सार्वजनिक गरेको सम्पति विवरणमा चितवनमा एक कट्ठा जमिन र तीन तोला सुनमात्र रहेको भनेका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले प्रचण्डको सम्पति विवरण भ्रम छर्ने खालको भएको भन्दै टिप्पणी समेत गर्न भ्याएका थिए ।
पैतृक सम्पतिबाट प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको नाममा एक कट्ठा जमीन र तीन तोला सुन रहेको विवरणमा उल्लेख गरिएको थियो । प्रचण्डले हातमा लगाउने घडी नै एक लाख बराबरको भएको बताइन्छ । उनी सुत्ने पलंङ मात्रपनि लाखौँको छ भनिन्छ ।
उनको खानपान, रहनसहन देखि लिएर उनले आफ्ना सन्तान हरुका लागि गरेको तामझाम हेर्दा पनि उनको सम्पति त्यतीँ नै भनेर सहजै विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ ।पटक–पटक पत्नी सीताको उपचार अमेरिकादेखि लिएर अन्य धेरै देशहरुका प्रचण्डले नगराएका पनि होईनन् ।
तर प्रचण्डको परिवारबाट नै यस विषयमा कुनै प्रतिकृया नआएका कारण यसलाई साँचो मानिएको छ । उक्त ट्वीटमा दर्जनौंको संख्यामा प्रतिकृयाहरु आएका छन् ।
धेरैले भनेका छन् गणतन्त्रको उपलब्धी नै यही त हो । यो महललाई तपाईहरुपनि निहाल्नुहोस् । आफूलाई लागेको प्रतिक्रिया जनाउनुहोस् । जनबोली बाट